ब्रुकलिनमा नयाँ के छ?
by एलिसन लोभेनस्टीन
ब्रुकलिनमा यी आठ नयाँ स्पटहरू भ्रमण गर्नुहोस्
ब्रुकलिन पछिल्लो केहि दशकहरु मा एक पुनर्जागरण देखि गुजर रहेको छ, बार्स को आसपास नयाँ दुकानहरु, बार, नाइट क्लबहरु, बुटीकहरु र यहां सम्म कि संग्रहालय संग। जब तपाईले आगामी जेनी ब्रुकलिनमा निश्चित रुपमा स्थापना गर्नुभएको स्थानीय मनपर्ने भ्रमण गर्नुपर्दछ - उदाहरणका लागि तपाईले रोबर्टाको बुशविकमा पाईको अर्डर गर्नु पर्छ र सडकमा सडक कला जाँच गर्नुपर्नेछ - यी नयाँ स्पटहरू तपाईंको यात्रा कार्यक्रममा। आधुनिक ककटेल सलाखहरूबाट बच्चाहरूको संग्रहालयमा, प्रत्येक यात्रीको लागि केहि छ।
तपाईले यो स्थानमा यो स्थान सूचीमा खानु भएको छ भने, तपाईं 2017 मा धेरै बढ्दो ब्रुकलिन उद्घाटन हेर्न सक्नुहुन्छ। विलियम्सबर्ग होटेलबाट डिसेम्बर 2016 को डिभिब मार्केट हॉलमा रिजर्भेसन लिइरहँदा त्यहाँ काममा धेरै खुल्ला छ। व्यक्तिगत रूपमा, म ब्रुकलिनको सर्वोत्तम स्वतन्त्र स्वतन्त्र पुस्तक पसलको ग्रीनलाइट बुकस्टोरको नयाँ नतिजाको बारेमा उत्साहित छु जुन प्रोसेक्स पार्क लेफर्ट्स बगैंचामा दोस्रो स्थान खुला हुनेछ। वास्तवमा, तपाईं निर्माणको बारेमा पढ्न र उनीहरूको ब्लगमा पसलको उद्घाटन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। एक ठाउँमा जहाँ ठूलो खुदरा पुस्तककलावरहरूले आफ्नो ढोका बन्द गर्दैछन्, यो ब्रुकलिनमा उद्घाटन गर्ने नयाँ इन्डी बुकस्टोरहरू हेर्नको लागि ताजा हुँदैछ। अर्को ब्रुकलिन मनपर्ने, नाइटहोर्क चलचित्रले पार्क स्लपको चलचित्र चलचित्र थिएटरमा अर्को दाखोलामा खोलिरहेको छ, जो धेरै ठूलो उद्घाटन हो कि ब्रुकलिनमा हुने हो।
यद्यपि, तपाईं यी दस स्थानहरू खोल्नको लागि पर्खनु पर्दैन, तपाईं अब उनीहरूको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ!
Alamo Drafthouse, फोटो क्रेडिट विक्टोरिया स्टीवन्स
यदि तपाईं फिल्महरूमा पॉपकर्न भन्दा बढी चाहानुहुन्छ भने, अल्मो ड्रेफथुउसको प्रमुख। यो अस्टिन आधारित डाइन इन फिल्म चलचित्र थिएटर ब्रुकलिनमा अक्टोबर 2016 मा स्थान खोलियो। स्वस्थ सलाद (केले र मन्चेन्जो सलाद, कुनै पनि?), पान्सेटा म्याक र पनीरको सूची सहित राम्रो खाईको मेनुको साथमा स्यान्डविच र फ्लैटब्रेडको बिचमा, यो फिल्म मायालु खानाको लागि आदर्श स्थान हो। अर्डर सजिलो छ, तपाईं सबैले तपाईंको अर्डर लेख्नुहुन्छ र रेलमा राख्नुहुन्छ, र झीक्क हेर्दा आफ्नो खानाको मजा लिन्छ। तपाईं यस हिप स्थानमा स्टेल प्रिटजल र सफ्ट पेयलाई टॉस गर्न सक्नुहुनेछ, जसले आफ्नो सात पर्दाहरूमा हाल र रेट्रो चलचित्रहरू स्क्यान गर्दछ। परिवारहरूले आफ्ना बाल-अनुकूल चलचित्र श्रृंखलाको आनन्द लिनेछन्, र फिल्म बफले क्लासिक चलचित्रहरूको राम्रो तरिकाले क्युरेट लिस्टलाई प्रेम गर्नेछन्।
पछि, यदि तपाईं फिल्ममा छलफल गर्न चाहानुहुन्छ भने, अलामो ड्रेफथहाउसमा मोम पट्टीको हाउसबाट रोक्नुहोस्। बार एक भ्रमण को लायक छ, यसको रूपमा मोम संग्रहालय को रूप मा डबल्स। वास्तवमा, "मोक्सको घर" मा प्रदर्शित अधिकांश वस्तुहरू कास्टनको पनपिटिकमको रूपमा चिनिने लोकप्रिय प्रदर्शनीको अवशेष हुन्। 1869 मा बर्लिनमा स्थापित र 1922 सम्मको समयसम्म कास्टन एउटा जर्मन संग्रहालय थियो जसले " एलेसिस, "एक" सबै चीजको प्रदर्शन। "चेतावनी, अविश्वसनीय ग्राफिक छविकाहरू छन्, तर तपाईलाई हेर्ने छैन, बस पट्टीमा बसोबास र नेपोलियन मृत्यु मास्क (क्यान्गैक, कार्डामोरो, सिनेर, रुबर्ब जस्तै एक डराउँदो ककटेलको आनन्द लिनुहोस्। बिट्टरहरू, बेकन, साल्ट) वा हाउभरको कसाई (फर्निट ब्रान्का, कार्पानो एन्टिका सूत्र, लेमन, आईपी, अस्टोस्टेर)। तपाई निश्चित रूपमा महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं एक फिल्मको लागि एक सेटमा हुनुहुन्छ यो ब्रेकमा ब्रोकलिन शहर ।
यो साइकल वेड बार र रेस्टुरेन्ट जो विलियम्सबर्ग ब्रिज को छाया मा विलियम्सबर्ग मा खोलिएको छ, "बाइक बाइक" शब्द को एक नया मतलब दि्छ। बार वेलो "1 930 के दशकको चक्र चक्र संस्कृतिको लागि एक नोड" र मालिक मालिक जॉन म्याकर्मिकिकले आफ्नो पत्नीसँग रेस्टुरेन्ट खोलेर चक्रवात र बाइक मेसेन्जर प्रयोग गर्थे। यद्यपि, यो बार वेलोको पेयका बारे सबै होइन, तिनीहरू शाकाहारी मेनु व्यापक रूपमा छन्, र आरामदायक ठाउँ म्याकर्मिकिकको बाइक गियरको सङ्कलनसँग बाहिरिएको छ। पूर्व कैफे मोटो, एक स्थानीय पसंदीदा मा स्थित छ, यस नयाँ रेस्टुरेन्ट मा पनि लाइव संगीत हुनेछ। ककटेलको मजा लिनुहोस् र सम्भवतः अन्य बाइक प्रेमीसँग विलियम्सबर्गको यो नयाँ अतिरिक्त सुविधामा कुराकानी गर्नुहोस्।
एक फेस्ट Coppi ( Mezcal, हरियो Chartreuse, Maraschino र ताजा चिमनी ) वा Belleville ( व्हिस्की, नींबू, रोम टमाटर, ताजा तुलसी ) र भोजनमा भित्ता अखरोट पिट ( ग्रील्ड बटुउट र Cornichons संग ) र धीमी भुना हुआ टमाटर Fettuccini सहित भोजन। , धेरै अन्य स्वादिष्ट उपचार संग।
विलियम वेले, फेसबुक
हालैमा खोलिएका नयाँ इटालियाली रेस्टुरेन्ट ल्यूका, विलियम वेले, विलियम्सबर्गको हृदयमा एक लक्जरी बुटीक होटल, यसको क्लासिक सोफिया लरेन सुन्डेसँग एकदम सुन्दर बनाएको छ। एन्ड्रयू कार्मेलिनीको नोहो हस्पिटलिटी ग्रुपबाट भोजनालयसँग विभिन्न प्रकारका इटालियन स्वादको साथ देहाती भान्साको मेनु छ। दक्षिणी इटालियन डिप्सको साथ सुरू फ्याई सिसिओको साथ सुत्ने कामदार जस्तै शहको दूध रिक्ति, मासुको शरिर र लसुन वा इटालियन बटर बिनसँग जंगली मशरूम। घर बनाइएको pastas, काठ निकालिएको पिज्जा वा विशेषता बर्तन संग यसलाई पछ्याउनुहोस्, ब्लिस्टर पेपर संग दुई को लागि लेमन चिकन सहित।
तपाईंले आफ्नो निर्णायक इटालियन रात्रिको खाना समाप्त गरेपछि, तपाईंले वेस्टलाइटको दृश्यहरू हेर्नु भएको छ, जस्तै कि तपाईं रोमपट्टीबाट ककटेल पिपिदिनु भएको बेला विलियम वेलको बीस सेकेन्डमा, जुन शहरमा सबैभन्दा प्रभावशाली विचार छ। वेस्टलाइटको लागि मेनु एन्ड्रयू कार्मेलिनीको नोहो हस्पिटलिटी ग्रुपबाट पनि छ
Leuca र Westlight दुवै को लागि आरक्षणहरू बनाउन निश्चित हुनुहोस् किनभने दुवै अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय छन्।
ब्रुकलिन बालबालिकाको संग्रहालयद्वारा चकित
स्पार्क, प्रसिद्ध ब्रुकलिन बच्चाहरु को संग्रहालय को एक झलक, ब्रुम्लिन ब्रिज पार्क मा डुम्बो मा खोलिएको छ। उद्घाटन प्रदर्शनी ब्रुकलिन ब्लक ल्याबको दोस्रो स्थान हो, ब्रुकलिन बालबालिकाको संग्रहालयको हस्ताक्षर - अत्यन्त लोकप्रिय - प्रारम्भिक बालबालिका निर्माण-ब्लक खेल ठाउँ जसले ब्ल्याक प्लेको प्रयोग गर्दछ जसले सामाजिक र संज्ञानात्मक कौशललाई समर्थन गर्दछ - टीम-निर्माण र रचनात्मक सोचबाट STEM लाई। अवधारणाहरू, समस्या समाधान गर्न, गणित, स्थानिक तर्क र पूर्व-इन्जिनियरिङ अवधारणाहरू समेत।
ब्रुकलिन ब्लक लैबमा इन्डोर र आउटडोर स्पेसको 1500 वर्ग फुट हुनेछ र कल्पना खेल मैदान, म्यागना-टाइल्स र कपला प्यान्कहरू द्वारा ब्लक निर्माणका दुई क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ। राम्रो मौसममा, ब्रुकलिन ब्लक ल्याब को नजिकै ब्रुकलिन ब्रिज पार्क को जॉन स्ट्रीट सेक्शन मा बाहिर आयोजित गरिनेछ। स्पार्कले संग्रहालयको कला बनाउने, डिजाइन, र वास्तुकला कार्यक्रमको लागि एक कला स्टूडियोको सुविधा दिन्छ। साथै, युवा बच्चाहरु को लागि एक नरम क्रल स्थान छ र एक ह्यान्ड-इन क्षेत्र डिस्कवरी डे भनिन्छ, जो संभाल सक्षम प्राकृतिक विज्ञान नमूनों र सांस्कृतिक कलाकृतिहरु को संग्रहालय को स्थायी संग्रह को एक बदल चयन को विशेषता हो।
संग्रहालय सुशील मंगलवार आइतवार को माध्यम ले छ र यदि तपाईं बच्चाहरु लाई टावर मा मिलन को लागि एक आदर्श स्थान हो। यदि तपाइँ ब्रुकलिनको लागि बच्चा-अनुकूल यात्रा तय गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो बच्चा-अनुकूल गाइड बुकमार्क गर्न निश्चित हुनुहोस्।
यो क्लार्क स्ट्रीट सबवे स्टेसनमा यो फ्रिकोटा टको पसल केवल दर्शकहरूको लागि एक प्लस मात्र होइन, तर यसको एउटा गन्तव्य मात्र हो। मानिसहरू 2/3 ट्रेन लिन केवल टाढा राख्न र आफ्नो प्रसिद्ध नाश्ता टेकोसहरू मध्ये एक छान्नुहोस्। तपाईं जलापा-इन्फ्लूगरिएको खरगोश अण्डासँग अँटोको डिनर सुत्नु पर्दैन, किनकि तिनीहरू दिनहुँ टीकोको सेवा गर्छन्।
एकपटक तपाईंले आफ्नो नाश्ता टको बनाउनुहुँदा, तपाइँ शायद तपाइँको खाना खानुको लागि एक ठाउँ खोज्न सुरु गर्नुहुनेछ। क्लार्क स्ट्रीटमा दाँया बनाउनुहोस् र दुईवटा ब्लकहरू जारी राख्नुहोस् जब सम्म तपाईं ब्रुकलिन हाइट्स प्रोरेडेड सम्म पुग्नुहुन्न। एक स्वादपूर्ण खाने खाएर एक दिन सुरू गर्न कुनै राम्रो तरिका छैन (FYI-तिनीहरू धेरै मसालेदार छैन) नाश्ता टको लोअर मैनहट्टनको सुन्दर विचारमा हेर्दै।
बार्गेड भाइ र शेफ, मैक्स र एली सुसेसन, उनीहरूको पप अप रेस्टुरेन्टहरूमा बर्ग'न र थियस ब्रेकिंगका लागि चिनिन्छन्, अब विलियम्सबर्गमा एक रेस्टुरेन्ट, सिमासा छ, उनीहरूले "ह्वाइल-इन-दीवार फालाफेल जोडीको प्रेम" , हेलिक ट्रकहरू र डेट्रिटबाट न्यूयोर्कबाट मध्य पूर्वी रेस्टुरेन्टहरू ... " मध्य पूर्वी मेनुबाट हाइलाइटहरूले चिकेन शर्मा, भ्याक्स जक्रिनी फ्रिटरहरू र डिप्सको वर्गीकरण समावेश गर्दछ जुन सुकुर र पनीर टिप्सका साथ दाल र पिस्ता सहित भुइँमा भएको चकलेटको वर्गीकरण हुन्छ। pumpernickel pita संग। मध्य पूर्वी व्यञ्जनमा रित्तो र आविष्कारक छिनमा सिमासा खडा हुन्छ। तपाईं विलियम्सबर्ग अन्वेषण गर्दै हुनुहुन्छ जब लंचको लागि रोक्नुहोस्।
ग्लास घण्टा विलियम्सबर्गमा एन्टि-कैफे प्रदान गर्दछ एक अनोखी युरोपियन प्रेरित भुक्तानमा मिनेट मूल्य निर्धारण ढाँचा द्वारा प्रदान गर्दछ जुन धेरै प्रेस थिईरहेको छ। एक युरोपेली प्रवृति पछि मोडेल, तपाईं असीमित कफी पिउन सक्नुहुनेछ जबसम्म तपाईं आफ्नो घण्टा माथि छ एक मिनेट पछि पहिलो घण्टा र दस सेन्टका लागि छ। यदि कफीले तपाईंलाई अनिद्राको गम्भीर डट कम दिनुभएको छ र तपाईं सम्पूर्ण दिन रहन निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईले बीस चार रुपैया खर्च गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले ब्रुकलिनमा कहिल्यै ठुलो चक्रको आदेश दिनुभएको छ भने, तपाईंलाई थाहा छ कि यो एक वास्तविक सम्झौता हो। तर गम्भीरतापूर्वक, यो एक कप कफी संग एक घन्टा खर्च गर्न को लागि एक राम्रो नयाँ स्थान हो ब्रुकलिन को यात्रा मा लगाउने वा केहि काम गरे। यदि तपाईं घरको आराम सम्झनुहुन्छ भने, तिनीहरूसँग PS4 र एक फोओसबल तालिकाको साथ ग्यामररोम छ। यदि तपाईं पारंपरिक कफी पसलको लागि शिकार हुनुहुन्छ भने, ब्रुकलिनको बेस्ट कफी पसलहरूको सूची हेर्नुहोस् ।
सेप्टेम्बर 2016 मा, ब्रोकलिन बजार फेरि लगभग 18 महिना पछि फेरि खोल्यो। नयाँ ब्रुकलिन बजार पोलोनेस ट्रेस को पूर्व स्थान मा स्थित छ, ग्रीनपोइन्ट को दिल मा एक पोलिश भोज हॉल। ठाउँ अहिले कन्सर्टका लागि घर छ र पिंग पोंग प्ले गर्नको लागि उत्तम स्थान हो, साथीलाई गोल्फको गोल्फमा चुनौती दिनुहोस्, उनीहरूको आर्केडमा भिडियो गेमहरू मजा लिनुहोस्, चार पट्टीहरूमा एकमा पेन्नुहोस्, र यो ग्रीनपोइन्टमा यो आश्चर्यमा फ्लाकहरू हेर्नुहोस्। एवेन्यू, जहाँ तपाईं एक्टिवेट को फैलावट मा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं ग्रीनपोइन्टमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हुड वरिपरि यी चौधरी अन्य हप स्पेसहरू जाँच गर्नुपर्छ। कला देखि artisanal भोजन, t hese पन्द्रह स्थानहरू भेट्न अनिवार्य छ।
Macy को चौथो जुलाई फायरवर्क कसरी प्राप्त गर्ने
ब्रुकलिन देखि मैनहट्टन बाट फेरी वा पानी टैक्सी चलाउँछ?
NYC 's संग्रहालय आधुनिक कला (एमएमए) को लागि एक गाइड: घण्टा, स्थान र थप
रेड हुक, ब्रुकलिनमा काम गर्ने कुरा
न्यूयोर्क शहरमा ग्राउण्डहोग दिवस
स्थानीय र आगन्तुकहरूको लागि उत्तम न्यूयर्क शहर अनुप्रयोगहरू
सुज्रेनलाई सोध्नुहोस्: के होईन कुनै पनि सबै समावेशी पारिवारिक रिसोर्ट्स हो?
एरिजोना मा एक रियल एस्टेट लाइसेन्स कसरी प्राप्त गर्ने
मध्य अमेरिका मा प्रेतवाधित स्थानहरु
पेरिसको सर्वश्रेष्ठ बेले बजारहरू नेभिगेट गर्दै
ट्रेकिंग कावा इजेज ज्वालामुखी, इंडोनेशिया
नक्सा र दिशा निर्देशन पेंटागन र पेंटागन सिटी मल सम्म
लस एन्जलसमा पर्यटक सूचना केन्द्रहरू
लिटिल रकमा प्रेतवाधित घरहरू
मन्ट्रियल मार्च मौसम र घटना गाइड
5 फ्लोरिडा कि परिवारहरु को लागि फ्लोरिडा रिसोर्ट्स
न्यूयोर्क शहरमा हीरे र आभूषण मार्ग
बार्सिलोनाबाट कसरी मोन्टसेराट दिवस यात्रा योजना
शीर्ष मोशन चित्रहरू फिलिममा र हवाई मा सेट गर्नुहोस्